Hordhac: Zlatan Ibrahimovic iyo jamaacadiisa oo caawa fiidkii wajihi doona dhigooda Ireland | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Hordhac: Zlatan Ibrahimovic iyo jamaacadiisa oo caawa fiidkii wajihi doona dhigooda Ireland
Hordhac: Zlatan Ibrahimovic iyo jamaacadiisa oo caawa fiidkii wajihi doona dhigooda Ireland
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 13-06-16 12:25 PM Ireland ayaa foodda dari doona xulka Sweden kulankooda furitaanka Euro 2016 ee ka tirsan safka Group E kaasoo ka dhici doona garoonka Stade de France ee caasimadda Paris.
Republic of Ireland ayaa markeedii seddaxaad kasoo muuqaneysa ciyaaraha kama dambeysta ah ee European Championships, laakiin abid ma aysan dhaafin ciyaaraha wareega koowaad.
Xulalka Kulmaya: Ireland vs Sweden
Saacadda: 7pm (Xilliga Geeska Africa)
Garoonka: Stade de France – Paris
Ciyaaraha Wareega 1aad Group E – Euro 2016
Guusha ugu weyn ee ay ku faanaan Jamhuuriyadda Ireland ayaa ah inay gaareen ciyaaraha quarter-finalka Koobkii Adduunka 1990kii. Xulka Martin O’Neill ayaana celcelis ahaan 3-1 uga soo badiyey dhiggooda Bosnia-Herzegovina ciyaarihii bugbaxda si ay boos uga helaan bandhigga France.
Laakiin waa inay rajeeyaan in aysan ku celin wixii kama dambeysta tartankaan kula dhacay afar sanno ka hor, markaasoo laga badiyey dhammaan seddaxdoodii kulan ee furitaanka ee ciyaarihii Euro 2012.
Dhanka kale, Sweden ayaa markeedii lixaad kasoo muuqaneysa ciyaaraha kama dambeysta ah ee European Championships waana markeedii shanaad oo xiriir ah. Hal jeer oo keliya ayey gaareen ciyaaraha bugbaxda tartankaan waana sannadkii 2004tii. Sweden ayaana si la mid ah Jamhuuriyadda Ireland kusoo baxday bugbax iyadoo celcelis ahaan 4-3 uga soo badisay xulka Denmark.
Jamhuuriyadda Ireland ayaa mareysa seddax kulan oo aysan wax guul ah gaarin kulankoodii ugu dambeeyey ee saaxiibnimo guuldarro 2-1 ah ayey kala kulmeen Belarus halka ay barbardhac la galeen Holland iyo Slovakia ka hor kulankaan. Balse laba guul ayaa uga sii horreysay iyadoo ay xusid mudan tahay inaan laga badin shan kulan ka hor kulankoodii ugu dambeeyey. Ireland ayaana dhalisay ugu yaraan hal gool kulan kasta oo ka mid ah 11keedii ciyaarood ee ugu dambeeyey.
Dhanka kale, Sweden lagama adkaan sagaal ka mid ah 10keedii kulan ee ugu dambeeyey, iyadoo badisay shan ka mid ah, afarna barbardhac gashay. Guuldarradooda keliya waxay kasoo gaartay Turkey. Si kastaba ha ahaatee, laba jeer ayey badiyeen todobadoodii kulan ee ugu dambeeyey.
Xulka Jamhuuriyadda Ireland ayaa arkaya weeraryahankooda Robbie Keane oo shaki weyn ku jiro ka hor kulankaan, halka Jonathan Walters iyo Robbie Brady ay iyana la dhibtoonayaan inay taam u noqdaan ciyaartaan, laakiin labadoodaba waxaa la filayaa inay kusoo bilowdaan kulanka ay wajahayaan Sweden.
Si kastaba ha ahaatee, James McCarthy ayaa kasoo bogsaday dhaawac wuxuuna diyaar u yahay inuu kusoo bilowdo qadka dhexe kulankaan isagoo ka garab ciyaari doona xiddigaha Glenn Whelan iyo Jeff Hendrick.
Dhanka kale, tabaaraha xulka qaranka Sweden Erik Hamren ma qabo dhaawacyo uu ka welwelo ka hor kulankaan wuxuuna heystaa koox wadataam ah, waxaana la filayaa inuu kusoo bilowdo kulankaan shaxdiisa ugu adag maadaama uu u yahay kulan muhiim ah.
Sweden ayaa rikoorka weji ka wejiga ah uga wanaagsan xulka Ireland iyadoo ka badisay shan ka mid ah 10 kulan oo ay foodda isdareen labadaan xul, halka laga badiyey seddax kulan laba kulanna barbardhac ayey ku dhammaadeen.
Sweden abid guuldarro kalama aysan kulmin Ireland ciyaar tartan rasmi ah, rikoorkooda guud ayaana ah afar guul iyo laba barbardhac lix kulan oo ay foodda isdareen.
Ireland (4-3-2-1): Randolph – Brady, Clark, O’Shea, Coleman – McCarthy, Whelan, Hendrick – Hoolahan – Long, Walters.
Sweden (4-4-2): Isaksson – Olsson, Lindelof, Granqvist, Lustig – Forsberg, Ekdal, Kallstrom, Durmaz – Berg, Ibrahimovic.